Tag: farsamooyinka isku xidhka isku xidhka » Martech Zone
Tag: farsamooyinka isku xidhka
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Waayahay, cinwaankaasi wuxuu noqon karaa mid yar oo marin habaabin ah. Laakiin waxay heshay dareenkaaga waxayna kugu heshay inaad gujiso boostada, miyaanay ahayn? Taasi waxaa loo yaqaan 'linkbait'. Maanaan la iman cinwaanno kulul oo cinwaankeedu yahay bartaas oo kale caawinaad la'aan… waxaan isticmaalnay Generator Idea Content Generator. Dadka xariifka ah ee Portent waxay soo bandhigeen sida fikradda matoor dhaliyaha ku timid. Waa qalab aad u fiican oo ka faa'iideysanaya farsamooyinka isku xirka isku xidhka ee jira
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Waxaan kaqeybgalay munaasabad weyn oo shalay loogu magacdaray Shirka Hal-abuurka, kaas oo ay dhigteen shirkadda 'Indo-based TechPoint'. Clayton Christensen, af-hayeenka, borofisarka, iyo qoraa ka socda Jaamacadda Harvard ayaa ka hadlay hal-abuurka carqaladda waxayna qabteen shaqo la yaab leh. Mid ka mid ah qodobada uu ka hadlay qaybta dambe ee soo bandhigidiisu waxay ahayd inuu ogaado shaqada ay macmiilkaagu uga baahan yahay wax soo saarkaaga ama adeeggaaga inuu qabto. Wuxuu tusaale u soo qaatay shaashad caano iyo sida, loo maro